Sababta uu M'Baye Niang ku diiday Horyaalka England oo la ogaaday - Radio Risaala: Somali News Online
Home Ciyaaraha Sababta uu M’Baye Niang ku diiday Horyaalka England oo la ogaaday
Sababta uu M’Baye Niang ku diiday Horyaalka England oo la ogaaday
M’Baye Niang ,ayaa sheegay inuusan marnaba ku fakirin inuu ka tago Milan, inkastoo wararka qaar ay ka xiriirinayeen kooxda Hogaamineysa Horyaalka Ingiriirka ee Leicester.”
Weeraryahanka ayaa la hadlay Milan News waxaana uu beeniyay inuu wax wadahadal ah la sameeyay kooxda ka dhisan Premier League ee Leicester City.
“Waxaan marna ku fakarin inaan ka tago Milan, inkastoo dadka qaar ku fikiray si aan horay u joogay ay ku fakireen inaan ku biirayo Leicester, Waxaan mar walba leeyahay kaliya Milan waa maskaxdayda, sida aan u sheegay Adriano Galliani iyo tababaraha Waxaan doonayay inaan waqti kasta joojo Rossoneri. ”
Niang ayaa dhawac uu kasoo garay kulankii barbaraha 1-1 kooxdiisa ay la galeen Udinese isbuucaan ,waxaana shaki uu kujiraa inuu ciyaarayo kulanka Axada ee Genoa.
Previous articleMacalinka Juventus Allegri oo ka hadlay inuu ku biirayo Chelsea
Next articleGudoomiyaha Buulo-Burde: ” Alshabaab ayaa dilay wadaadkaas”